Buuhoodle: Madaxdhaqameed Ka Yimi Garoowe Oo Lagu Mudaharaaday Iyo Gaadhigii Islaam Siciid Garaase Oo Koox Dablay Ahi Ku Dheceen Deegaankaa | Araweelo News Network (Archive) -
Buuhoodle: Madaxdhaqameed Ka Yimi Garoowe Oo Lagu Mudaharaaday Iyo Gaadhigii Islaam Siciid Garaase Oo Koox Dablay Ahi Ku Dheceen Deegaankaa
Buuhoodle(ANN) wararka ka imanaya deegaanka Buuhoodle ayaa sheegaya inuu halkaa ka dhacay maanta Banaan bax balaadhan oo laga soo horjeedo Socdaal ay ku yimaadeen magaalada Buuhoodle Madax-dhaqameed ka socda maamulka lala xidhiidhiyo Budhac badeeda ee xaruntiisu
tahay Garwooe. Sidoo kale waxay wararku sheegayaan in deegaankaa lagu dhacay Baabuur uu watay Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo Hoggaaminayay madaxdhaqameedka ka yimi dhinaca Garoowe ee tegey Boohoodle.
Dad goob joog ayaa u sheegay shebekada wararka ee Araweelonews inay Dadweynaha Magaalada Buuhoodle ku dhawaaqayeen erayo ay weftigaa iyo booqashadoodaba kaga soo hor jeedaan, isla markaana ay kaga dalbanayaan inay ka baxaan magaalada.
Kooxda Madaxdhaqameedka ee ka yimi dhinaca Garoowe waxa horkacayay Islaam Siciid Maxamed Garaase oo ay weheliyaan 12 Caaqil oo kale oo dhamaantood ka yimi deegaanka Garoowe, waxayna dadka goob jooga ahi sheegeen in aan gebi ahaanba lagu soo dhowayn deegaankaa Odayaashaa, isla markaana ay koox dablay hubaysani ka dhaceen Gaadhigii Suldaankaa hogaaminayay Odayaasha.
Dhinaca kale Idaacada BBC-da ee laanta Afka Soomaaliga ayaa sheegatay in deegaankaa koox hubaysani ku dhacday gaadhigii uu watay Islaam Siciid Maxamed Garaase oo watay, balse islaam Garaase oo Idaacada BBC-da la xidhiidhay ayaa beeniyay wararka sheegaya in koox hubaysani deegaanka Buuhoodle kaga dhaceen gaadhigii uu watay, isla markaana wuxuu ku dooday in si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle.
“Waxaan ka xumahay in sidii layaabka lahayd ee naloogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle, waxaana soo dhawayntayada ka qeyb galay dad tiro badan oo isugu jiray Isimo iyo dadweyne, waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin wax baabuur ah oo la iga dhacay,”ayuu yidhi, Islaam Siciid Maxamed Garaase oo galabta u waramayay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da.
Islaam Garaase ayaa ujeedada socdaalkooda ku tilmaamay mid ku wajaahan sidii ay wax ugu ogaan lahaayeen abaarta baahsan ee ka jirta deegaanadaa iyo sida ay u saamaysay dadka iyo xoolaha deegaankaa. Laakiin warar kale oo madax banaan ayaa u sheegay shebekada wararka ee Araweelonews inay u socdaan Islaam Garaase iyo Odayaasha kale arrimo siyasadeed iyo kuwo colaadeed oo ka taagan deegaanka oo u dhexeeya qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo deegaanka ay ka yimaadeen ee Garoowe.